Nlegharị anya ga-eto eto: ekele maka nchefu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Iwughachi » Nlegharị anya ga-eto eto: ekele maka nchefu
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Echefu echefu ndi njem 1
Ikike ichefu ihe bụ iji weghachite njem nlegharị anya? Ọ bụghị ihe nzuzo na ọgba aghara nwere ike imetụta echiche ndị njem na-eche ma ebe ọ kwesịrị ịga. Yabụ kedu ka ndị isi ga - esi mee njem nleta ichefu ihe ncheta na - egbu mgbu nke afọ 2020? Ma obu ndi njem dika ochicho imebi ihe ncheta ndia ma malitegharia ohuru?
Echefuru M echefuru
Ozi ọma maka ụlọ ọrụ ndị njem bụ na ekele maka ọnwa nke iche, ikike ncheta anyị emebiwo, ọ ga-abụ na ụfọdụ (ma ọ bụrụ na ọ bụghị ha niile) nke ihe ọjọọ ndị mere (n'otu n'otu na otu) ga-echefu ma ọ bụ belata na ike, na njem ga-eto ọzọ.
Echiche nke nchefu bụ ihe dị mkpa mgbe ụlọ nkwari akụ, ndị njem na ndị njem na-atụle omume postcrisis nke ndị ahịa ka ha na-eme atụmatụ atụmatụ ahịa ahịa. Site na itinye uche na nchefu na ncheta ncheta na ịhapụ echiche nke ihe ize ndụ, ndị isi ụlọ ọrụ nwere ike ịmalite nghọta nghọta na-emetụta usoro ntụgharị uche na mmetụta uche na-emetụta omume ndị njem.
Ọ bụghị nnukwu mbido iji kweta na nsogbu na nsogbu metụtara ebe nsogbu na-emetụta nsogbu. Mberede na / ma ọ bụ ọdachi nwere ike ibute mgbanwe na atụmatụ njem nke nwere ike ịgba ndị njem ume ka ha zere njem / mma, yigharịrị njem ma ọ bụ hichapụ echiche nke njem site na ezumike ma ọ bụ usoro azụmahịa.
Ọ dabara nke ọma maka ụlọ ọrụ ahụ, ka oge na-aga, echefuru mmetụta ọjọọ nke ọgba aghara, ma otu ebe na-agbake ka mkpa ndị mmadụ, ọchịchọ na ebumnobi ha na-eme njem bara uru karịa ihe egwu ahụ ma ha na-ewepụta oge na ego na ebe na / ma ọ bụ mma . Mgbanwe nke nghọta ga-eme ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ndị isi na-ahụ maka njem nlegharị anya emeela (ma ọ bụ yie ka ha emeela) iji dozie nsogbu ndị yiri ya.
Ncheta na nchefu
Njikọ dị n’etiti ncheta na nchefu sitere n’akụkọ ifo ndị Gris. Ncheta (Mnemosyne) na nchefu (Lethe) na-anọchi anya dị ka osimiri abụọ yiri ibe ha n'ime ala mmụọ nke Hedis na njirimara nke chi nwanyị nke Memory na Oblivion.
Achọrọ mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ ka ha drinkụọ mmiri mmiri Lethe ka ha chefuo oge ha bụ nwata tupu ha alaghachi ụwa, ebe a gbara ndị mbido ume ka ha drinkụọ site n'aka onye ibe ya, Mnemosyne, iji kwụsị mmebi iwu nke mkpụrụ obi dịka ha ga-echeta ihe niile ma nweta mmata niile. . Ncheta na nchefu na-anọchite anya echiche abụọ ejikọtara ọnụ.
Ka m na-agụ akwụkwọ akụkọ sitere na mkpakọrịta azụmahịa, otu ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ, ụgbọ elu na ọtụtụ ndị ọbịa na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze, enwere nkwenye siri ike na 2021 ga-ahụ nlọghachi na njem, nke ụlọ na nke ụwa. Ndị ọrụ na-ahụ maka njikwa na ndị ọrụ nyocha ndị ọzọ na-akpachapụ anya, na-atụ aro na ụlọ ọrụ ahụ ga-eche ma lelee anya ruo nkeji nke abụọ ma ọ bụ nke atọ nke 2 iji hụ ọnụ ụzọ ámá mepere emepe na ndị njem na-enwetakwa ụlọ nkwari akụ, ụlọ nri, ụlọ ahịa na ama obodo.
Ma ndị isi na-ahụ maka njem nlegharị anya ghọtara ya ma ọ bụ na ha amaghị, ihe ha na-agụta, ka ha na - agbakọta - atụmatụ a ga - alaghachi na ntinye ego ha (ROI), bụ "olile anya" nke ndị na - eme ezumike ga-echefu ihe jọgburu onwe ha nke 2020 wee cheta (jiri ihu ọchị) na ọ gụ), oge obi ụtọ ha nwetara na 2019 na tupu. O bu ihe nwute, site na nkwenye a na uche ha, ndi isi na eme ihe pere mpe iji gbanwee mgbanwe ha na ngwa ahia nke 2019 na obuna ulo oru ohuru ohuru adighi etinye usoro ohuru ohuru, teknụzụ, akwa mgbochi microbial na ihe ndi ozo n'ime oru ha nke nwere ike idozi meziwanye egwu na nchekwa nke ndị njem wannabe.
Onye edemede Laura Spinney (Onye na-agba ọsọ: Ọrịa Spanish nke 1918 na How it Changed World), chọtara, “Ọ bụrụ n’ileghachi anya azụ n’akụkọ ihe mere eme, mmụọ anyị dị ka ụmụ mmadụ echefuola ọrịa na-efe efe ozugbo ha gafesịrị. Anyị na-agagharị site na afọ ojuju na ụjọ. Anyị na-atụ ụjọ mgbe ọrịa a na-etiwapụ, mgbe ahụ anyị echefuru ya, laghachi na afọ ojuju, anyị anaghịkwa eme ihe ndị dị mkpa iji hụ na anyị ga-akwadebe nke ọma oge ọzọ.
Nyocha nke Disemba 2020, Coronavirus Travel Sentiment Index Report, chọpụtara na echiche ndị ahịa banyere njem emetụtala nke ukwuu Covid-19 na omume kwupụta njem na-ekewa n'etiti njikere na oge na ọkara nke ndị America na-adịchabeghị njikere ịhapụ nkasi obi nke ihe ndina ha na ájá kwụsịrị akwụkwọ ikike ngafe ha. Nnyocha e mere n’izu nke December 14, 2020 kpebiri na pasent 55 nke ndị America e nyochara nwere obi amamikpe banyere njem “ugbu a,” pasent 50 tụfuru mmasị niile nke njem “ugbu a.” Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isii n'ime 10 (58%) kwenyere na njem kwesịrị ịbụ oke, naanị, maka mkpa ndị dị mkpa yana pasent 50 na-ekpebi na ndị njem agaghị abịa obodo ha, "ugbu a." A na-akpali mkpali maka njem na Q2 nke 2021 na 2/3 nke ndị America na-achọpụta na ọrịa na-efe ugbu a na-eme ka ha ghara ịga njem n'ime ọnwa atọ na-esote. Nhọrọ ogwu na-enwe mmetụta dị mma na pasent 50 nke ndị America na-eche na ogwu ahụ na-eme ka ha nwekwuo nchekwube maka njem dị mma (ustravel.org).
Otu nnyocha nke Global Business Travel Association (GBTA) (December 2020), chọpụtara na mmadụ atọ n'ime mmadụ anọ na-aza ajụjụ na-atụ anya na ndị ọrụ ga-aga nzukọ na ihe omume mmadụ na Q2 ma ọ bụ Q3, 2021. Mmadụ atọ n'ime mmadụ ise n'ime GBTA kpebiri na ogwu mgbochi bụ ihe dị mkpa na mkpebi ụlọ ọrụ ha ịmalite njem azụmahịa; Agbanyeghị, pasent 54 nke ụlọ ọrụ ndị otu GBTA ejighị n'aka banyere ọnọdụ ha gbasara nnweta ọgwụ mgbochi na ohere ịmalitegharị njem azụmahịa. Mgbe ọnụọgụgụ "oke" nke ndị bi na ọgwụ mgbochi ọgwụ, otu n'ime ụlọ ọrụ ise kwuru na ha ga-ahapụ ndị ọrụ ha ka ha gaa ọrụ.
Pasent iri atọ na isii nke ndị North America GBTA zaghachiri kwuru na ụlọ ọrụ ha amalitela ịhazi nzukọ / ihe omume 2021 na ihe karịrị ọkara na-eme atụmatụ obere nzukọ / ihe omume dị n'etiti ihe ruru ndị bịara 500. Dika nzuko ndi mmadu na eme ka ndi mmadu bia na nzuko nzuko a ga-ada (ustravel.org).
Nnyocha na-egosi na enwere ọchịchọ maka njem. Iji kwadebe maka akụ na ụba post-COVID-19 ụfọdụ ndị isi gọọmentị mba na mpaghara na-enyochagharị ngwaahịa ndị njem ha ma na-esi na njem ndị ọzọ na-erughị ala, na-edebekwu ego na akụ na ụba mpaghara, na ịmanye iwu mpaghara nke ga-echekwa usoro eco-system ha ma bawanye usoro iwu metụtara ahụike. A ga-enwe nnukwu asọmpi maka shrinking njem nleta dollar na a agbụrụ na ala. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ niile ga-enye mwepu ego miri emi iji jupụta ime ụlọ nkwari akụ na ọdụ ụgbọ elu.
Ndị njem ga-ahọta ebe, họtelu na ebe nkiri ndị na-akwalite ezi ọchịchị na usoro nlekọta ahụike dị mma. O yikarịrị ka onye na-azụ ahịa ọ ga-eme njem ugboro ugboro mana ọ ga-anọ ogologo oge. Ndị njem nwere ike ile ọrịa ahụ anya dịka amụma nke ihe ga-abịa site na ọgba aghara ihu igwe n'ihi enweghị mmasị nke ọha na eze na nke ọha na eze.
Maka ndị njem na-aga ọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu - ha nwere ike ịchọpụta na teknụzụ edochila anya kọntaktị nke onwe ha, yana mmelite dị mma na-ekwu banyere ikike ha ịdị ọcha. a ga-enwekwu nlele ọnọdụ okpomọkụ na ịwepụ mmekọrịta mmadụ na ụfọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọelu ga-anọgide na-achọ ka ndị njem na-eyi ihe nkpuchi.
Ime njem nke ụlọ ga-ahụ mmụba izizi nke mbụ na-abawanye n'ihi na ndị mmadụ ga-enwe ike njem n'ụgbọ ala nke ha, ụgbọ ala ma ọ bụ RV ndị na-enye ụfọdụ nchekwa na nchekwa. Njem njem mba ụwa ga - agbago elu - nke ndị na - eme njem azụ na ndị njem na ndị ọzọ na - achọ ka ha na ndị enyi ha na ndị ezinụlọ ha nwee mmekọrịta (foreignpolicy.com; wttc.org).
Anyị Nọ Ebe Ahụ?
N'oge ahụ - Ọ B NOGHERE… E! Onye isi oche nke World Travel & Tourism Council, Gloria Guevara, na-eche na njem nlegharị anya ga-amaliteghachi na 2022, ma ọ bụrụ na ndị mmekọ njem niile nwere ike ịhazi omume ha. ATAtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) buru amụma na mgbake na 2024 na Arnie Sorenson, Chief Executive nke Marriott nwere nchekwube maka nlọghachi nke njem nleta ma ejighị n'aka mgbe ọ ga-alaghachi na ọkwa 2019.
Ọ bụrụ na anyị lelee ụlọ ọrụ ndị njem anya site na akụkọ ihe mere eme - o doro anya na a ga-enwe nkwụghachi. Na 2011 Japan nwere ọdachi nuklia (Fukushima Dai-ichi nuklia nuklia). O were ndị njem ọtụtụ afọ iji wughachi ntụkwasị obi ha mana mgbe ha mere, ndị mbata si mba ofesi mụbara site na 13.4 nde (2014) ruo nde 31.2 (2018) na-eme ka Japan bụrụ ebe na-eto ngwa ngwa n'ụwa.
SARS bụ ihe egwu dị egwu, dịka Ebola - nke na-aga n'ihu na-aga n'ihu n'Africa; agbanyeghị, ọrịa anaghị emetụta safari. N'ikwu eziokwu, ndị mmadụ na-echefu - na-eme ya ozi ọma maka njem nleta.
UNWTO setịpụrụ iri ngo 34 Mba maka Nri Anyasị, Georgia Style
Hotelslọ nkwari akụ Saint Lucia na-enye ndị ọbịa ruru eru nnwale COVID-19 n'efu